BEERIDDA ABUURKA AH EE BASBAAS IYO EGGPLANT FOR GEEDO: SIDA IYO GOORTA LA BEERO, SHURUUDAHA QIYAASTA, DIYAARINTA ABUUR AH IYO KA KOOBAN CIIDDA, DARYEELKA CALEEMAHA - BEER CAGAARAN
Beerta ku habboon ee abuurka ah ee basbaas iyo geedo eggplant: markaad beertid, sida looga hortago musqulo, sida biyaha iyo daryeelka
Basbaas macaan iyo eggplants waa dalagyo kulul oo jecel oo jecel waraabinta wanaagsan iyo carrada nafaqo leh.
Dhirta Kuwani waxay badanaa ku koraan isla aqalka dhirta lagu koriyo, sidaas darteed geedo waa in la beeray waqti isku mid ah.
U hoggaansanaanta shuruudaha abuurka ee basbaas iyo eggplant for geedo, xulashada habboon ee abuurka iyo daryeelka taxadar leh damaanad qaadka wanaagsan ee mustaqbalka.
Maanta waxaan ka hadli doonaa sida loo aasayo basbaaska iyo eggplants loogu talagalay geedo, marka ay ku beeri karaan basbaaska iyo eggplants for geedo?
Goorta ay ku beeranayaan basbaaska iyo eggplants ee geedo?
Eggplant iyo basbaaska awood ku filan. Si loo xaqiijiyo biqilka wanaagsan iyo horumarinta haboon ee geedo, waa muhiim in la waafajiyo dhammaan xaaladaha, ka soo diyaarinta abuur in xulashada habboon ee ciidda.
Waqtiga beerashada for geedo of basbaas iyo eggplants sidoo kale waa mid aad u muhiim ah..
Inta badan, basbaaska iyo eggplants ayaa lagu beeray qeybta hore ee bisha Febraayo. Wixii 100 maalmood ah, dhirta dhalinyaradu waxay awood u leeyihiin in ay u guuraan aqalka dhirta lagu koriyo ama dhulka hoostiisa ee filimka.
Beerta qaar ayaa aaminsan waqtiyada kama dambaysta ah ayaa loo rogi karaa ilaa Maarso. Wakhtiga gaaban ee geedo sii kordhaya ayaa magdhow laga helaa iftiin cad.
Ka dib markii la rakibay nalalka korontada ee korontada ku shaqeeya weelasha iyo geedo, waxaa suurtogal ah in la dedejiyo koritaanka iyo horumarinta geedo.
Xaaladdan, muddada sii kordhaysa ayaa la dhimayaa 90 maalmood. Taariikhahaas waxaa lagu xisaabiyaa bartamaha Ruushka, gobollada koonfureed, basbaaska iyo ukunta waxaa lagu beeray badhtamaha Jannaayo, beerashada deganaanshaha rasmiga ah dhammaadka Abriil iyo horraanta May.
Laguma talinayo in la beero basbaaska iyo khudaarta ka dib bartamihii bishii Maarso.. Ka reeban waa kulul wareegyada sanadka oo dhan, kaas oo fruiting laga yaabo inay socon karaan ilaa dayrta goor dambe iyo xataa bilowga jiilaalka.
Bannaanka u badan beeraha basbaas iyo eggplants for geedo on Calendar taariikhda. Wixii beereed maalmo wanaagsan oo marka dayaxa ee wajiga koowaad uu ku jiro saameynta Scorpio, Libra, Aries ama Sagittarius.
Taariikhda saxda ah waxay ku xiran tahay sanadka. Kuwa ugu guulaha badan ee lagu beeray basbaaska iyo eggplants ayaa la tixgelin karaa muddooyinka laga bilaabo Jannaayo 17 illaa 20, laga bilaabo Febraayo 13 illaa 16, laga bilaabo 11 ilaa 13 iyo laga bilaabo 16ka Maarso ilaa 17.
Eggplant iyo basbaaska doorbidaa substrate iftiin leh acidity hooseeyo.
Isku darka abuurka ah ee ka kooban inta badan peat ma noqon doono ku habboon geedo. Beeraley kasta oo dhan wuxuu leeyahay cayayaanka saxiixa u gaar ah ciid wanaagsan.
Kuwa ugu guulaystay:
isku dar ah ciidda hore ee carrada iyo khudradda wasakheysan leh qayb yar oo ka mid ah ciid webiga la dhaqay;
peat iyo humus qaybo siman oo leh qayb ka mid ah balka dhoobada;
dhulka cagaaran iyo qoyaanka digada qoyan ee lamid ah;
dhulka beerta leh peat ee 2 illaa 1 miisaanka oo leh qadar yar oo ka mid ah wax baqdin ah.
Wixii geedo loam ma shaqeyn doonoAad bay u culusyihiin oo dhanaan. Isku dar kasta waa in la isku dayo si uu u dilo dirxiga cayayaanka.
In substrate diyaarisay, waxaa lagu talinayaa in lagu daro superphosphate iyo ash alwaax (1 tbsp ee superphosphate iyo 2 tbsp of ash in baaldi ciidda).
Beerta qaar waxay ku daraan dhuxul la jajabiyey. Isku darka si sax ah ayaa loo soo rogaa lakab iyo hawo.
Awoodaha geedo: waxa la dooranayo?
Inta badan ku beeri geedo basbaas iyo geedo eggplant soo saar weelal qoto dheer. Waxay ka buuxsameen ciidda dabacsan (lakabka 10 cm). Ciidda waxaa lagu daadiyay xal diirran oo biyo ah oo ah kaneecada kaneecada. 10-12 saacadood ka dib, grooves waxaa lagu sameeyey ciidda, taas oo miraha lagu beeray.
Masaafada udhaxeysa grooves oo ku saabsan 5 cm, abuur ah waxaa la dhigay la bareeg ah 1.5 cm. Lakabka A carrada waxaa lagu shubay sare ee 1.5 cm, ciidda waa is dulfuulan iyo waraabiyo biyo diiran.
Doorashada la midka ah ee soo degitaanka waxay ka dhigan tahay soo-dhaweynta. Laakiin qaar ka mid ah growers ma ku talinaynaa. Eggplants iyo basbaas waxay leeyihiin xidido daciif ah oo jilicsan, qaadista ayaa hoos u dhigi karta horumarka iyo xataa xitaa dhirta jilicsan.
Geedo tayo leh ayaa kori kara iyada oo aan. Si arrintan loo sameeyo, miraha waxaa isla markiiba lagu beeray dheriyo kala duwan. Waxay si adag u buuxsamaan substrate ah, abuur ayaa lagu meeleeyaa godad qoyan 1.5 cm oo qoto dheer oo daboolay dhulka. Ha abuurin boodh aad u qoto dheer.
Talo! Haddii ka dib markii biqilka abuurka kor u kacay dusha sare ee ciidda, soo saaro xididada, biqilka si tartiib ah lagu aasay, rusheeyey qayb qayb yar oo ciidda.
Halkii laga heli lahaa dheriyada peat caadiga ah waxaad isticmaali kartaa naqshadaha yaryar ee gurigaoo laga soo saarey filim caag ah oo qarxa oo lagu xoojiyay bandhiga.
Filimka, kaas oo si taxadar leh u duuban una daboolay hoosta, wuxuu si fiican u hayaa dhoobo dhoobo ah, ka duwan koobabka warqadaha, caaggu ma qooyo.
Transplantation waa si fudud loo fududeeyay: waa ku filan in lagu sii daayo geedo ka filimka iyo xanjo iyo u guurto godka laga sameeyay dhulka. Rootiyada Plant uma baahna inay ku jebiyaan derbiyada dheriga peat, dhirta u dulqaadan transplanting iyada oo aan shooga yar.
Kaliya keli ah ee sii kordhaya oo aan la qaadin waa sprouts daciif ah, taas oo ay tahay in la diido. Yaree halista waxay ka caawin doontaa in si taxadar leh loo xakameeyo abuurka, daaweyntooda kiciya kicinta kobcinta iyo biqilka bilowga ah ee nudaha qoyan.
Marka laga beerto, 2 abuur ayaa la gelin karaa dher kasta, iyo ka dib marka biqilka, biqilka daciifka ah ayaa laga saari karaa.
Xaggee si loo dhigo geedo?
Sanduuqyada leh geedo ama weelasha leh koobabka ayaa inta badan la dhigaa. on daaqadaha waaweyn oo ka mid ah daaqadaha koonfur iyo koonfur-galbeed. Muuqaalka dhalinyaradu wuxuu u baahan yahay iftiin dhalaalaya oo aan ahayn maalmo aad u iftiin badan Nidaamka ugu fiicani wuxuu iftiimiyaa iftiinka iftiiminaya 8 subaxnimo ilaa 8 galabnimo. Habeenkii, nalalka ayaa la damiyaa, iyo geedo waxaa lagu daboolay walxaha opaque.
Si aad u dhalatid dhalinyaro yar ayaa dareema raaxo waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u xirtid dhamaan dillaacyada daaqada, baabi'inta qoraalada. Waxay ka fiicantahay in lagu daboolo beteriyada kulul leh shukumaan qaro weyn leh. Heerkulka ugu fiican ee dufanka miraha waa 25-28 degrees, ka dib markii biqilka waxaa la yareeyey 22-25.
Sanduuq walba oo 3-bacood ah ayaa soo noqdasidaas darteed caleemaha ayaa iftiimaya iftiinka. Waa lagama maarmaan in la iska ilaaliyo si toos ah qorraxda on caleemo jilicsan, gaar ahaan ka dib markii waraabiyo. Xakamaynta dhibcaha biyaha, raajadu waxay gubi karaan dhirta aan qaangaarin.
Ka dib muuqaalka caleemo joogto ah waxay u baahan yihiin in hawo lagu nadiifiyo. Marka hore, sawirku wuxuu furanaa daqiiqado, ka dibna saacad ama ka badan.
Iyadoo bilawga kulaylka, caleemaha waayeelka ah waxaa loo qabtaa balakoonka ama barkada iyo ka tagay halkaas maalinta oo dhan. Dhibaatada noocan oo kale ah waxay xoojisaa dhirta dhalinyarada ah waxayna u diyaarisaa inay ku tallaalaan.
Waraabinta iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah
Isla markiiba ka dib markii la beero, miraha aan la waraabin. Si fiican loo diyaariyey ciidda ayaa xajiya heerka qoyaanka la rabay ee 4-5 maalmood.
Waa muhiim in la hubiyo in dhulka ku jira weelka uusan engegin ama jabin.. Haddii ay taasi dhacdo, waxaa habboon in la cabiro heerkulka carrada, laga yaabee inay ka badan tahay lagama maarmaan.
Xaaladdan oo kale, geedo waa in la isku hagaajiyaa meel qabow. Qoyaan-saameeyaha guriga ama buufinta joogtada ah ee ku xeeran sanduuqa seedling waxay gacan ka geysaneysaa yareynta hawada hawada.
Waraabka ugu horeeya ee buufin waxaa la sameeyaa maalinta 4aad kadib marka la beero. Biyaha waa in ay noqdaan kuwo diiran oo jilicsan, kala go 'ama la kariyey. Ka dib muuqaalka boogaha ugu horreeya, waraabinta waxaa la sameeyaa 1 mar 5 maalmood. Marka hore, geedo waxaa laga waraabiyaa shaaha, ka dibna waxaad isticmaali kartaa waraabinta waraabinta, inaad hubiso in qoyaanku uusan dhulka ku dhicin.
Ugu yaraan toddobaadkii hal mar, dhulku wuxuu u baahan yahay dabacsanaan. Maareynta iyo eggplants waa mid aad u xasaasi ah oo aan u dulqaadan biyo joogta ah ee ciidda.
Ka dib markii ay soo baxaan caleemaha koowaad u baahan yihiin si dhow ula socdaan horumarinta dhirta. Waraaqaha qallafsan waxay muujinayaan nafaqo la'aanta. Dhawaan Bacriminta yaryar ee nitrogeniyu waxay gacan ka geysan doonaan xoojinta iyo kordhinta tirada cagaaran.
Waxaa lagu sameyn karaa waraabinta ka dib marka la sameeyo 3 ka mid ah xaashiyahan. Kiciyaasha kobcinta ayaa gacan ka geysanaya xoojinta caleemaha jilicsan, waxaa lagu dabaqayaa ciidda ama loo isticmaalo buufinta.
Geedo xad dhaaf ah oo fidsan ayaa tilmaamaya iftiin la'aan. Isku day in aad gaabisid dayrka oo aad kordhisid iftiinka maalinta. Sababta daciifnimada dhirta waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah ama xad dhaaf ah ee ciidda. Iyada oo la hagaajinayo jadwalka waraabka, waxaad hagaajin kartaa xaaladda dhirta.
Waqtiga waqtiga lagu beeray geedo waxay damaanad qaadayaan horumarinta xilliga dhirta iyo soo bixitaanka tiro ku filan oo ugxan-miro ah.
The xoogaa caleemaha yar yar, si fiican u dhirta dadka waaweyn iyo miraha waxay noqon doontaa. Sharciyada beeritaanka iyo koritaanka guriga waa kuwo fudud, laakiin waxay u baahan yihiin xajmiga saxda ah iyo joogtaynta.
Sidaas, waxaan ka wada hadalnay beerashada abuurka ee basbaas iyo eggplant for geedo, marka si ay u beeraan basbaaska iyo eggplants for geedo? Sharaxaad ka bixi sida loo beeray basbaaska iyo eggplants geedo, taas oo weelasha ay ku fiican yihiin inay doortaan, iyo sidoo kale sida loo daryeelo nebiyada?
Kobcin habboon ee abuurka iyo haddii ay ku rusheeyaan ka hor beero?
Sababaha ugu muhiimsan ee caleemaha loo qallajiyey caleemaha, geedo dhicid ama la soo baxay, iyo sidoo kale sababta caleemaha u dhintaan?
Baro qawaaniinta beeritaanka Bulgarian iyo basbaaska kulul, iyo sidoo kale qoyan macaan?